Public Health in Myanmar: May 2009
The following article is copied from John Hopkins Public health news site.
Microbes in Mosquito’s Gut Stimulate Immune Response Against Malaria Parasite
Bacteria in the gut of the Anopheles gambiae mosquito inhibit infection of the insect with Plasmodium falciparum, the parasite that causes malaria in humans, according to researchers at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Scientists with the Bloomberg School’s Malaria Research Institute found that removing these bacteria, or microbial flora, with antibiotics made the mosquitoes more susceptible to Plasmodium infection because ofalack of immune stimulation. Their study is published in the May 8, 2009, edition of the journal PLoS Pathogens.
Labels: Communicable disease, Malaria, Tropical disease
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းလို့ ပြောတဲ့အခါ အဲဒါက ဘာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတာလဲလို့ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံချင်း ပေါ်မှာ မူတည်လို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားလည်ထားမှုတွေ၊ ဆောင်ရွက်နေမှုတွေ ကွာခြားနေပါလိမ့်မယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံကတော့ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးမှာ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန် ဆယ်ခု ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
(၁) စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်း
ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ ရောဂါ ပြန့်ပွားမှု အခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနေတဲ့ နေရာတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဲဒါတွေကို အမြဲတမ်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါမှ ဘယ်နေရာတွေမှာ ပြဿနာတွေ ရှိနေသလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိမှာပါ။
(၂) ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်း
ပြည်သူတွေ ကြားထဲမှာ ဘာကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ရှိနေသလဲ၊ ပြည်သူတွေ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရသလဲ ဆိုတာတွေကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ဖို့၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ တွေက ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။
(၃) ပြည်သူ လူထုကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အသိပေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်း
ပြည်သူလူထုက ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုယ်တိုင် သိနားလည်ခွင့်ရတဲ့ အခါ သူတို့မှာ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် မိမိ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေ ပိုများလာပါတယ်။ မိမိ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ မိမိ မိသားစုနဲ့ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေလဲ ပိုမို များပြားလာပါတယ်။
(၄) ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ခြင်း
ပြည်သူလူထုတွေ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်တွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ပါဝင်လာစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စီမံချက်တွေကို ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း(ဥပမာ- လူထုထဲမှာ ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့ သာရေးနာရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း)၊ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို အတူတကွ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ အတူတူ ဖြေရှင်းကြခြင်း။
(၅) ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ချမှတ်ရေးဆွဲ ခြင်း
- ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရပ်ရွာလူထု အဖွဲ့အစည်းတွေမှ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို အဲဒီမူဝါဒတွေနဲ့ ပံ့ပိုး ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
(၆) ပြည်သူလူထုရဲ့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ ဥပဒေတွေ ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ( ဥပမာ - တားမြစ် ဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်တာ)
(၇) ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံယူဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေကို လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သည့် နေရာများနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပြီး လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ အမှန်တကယ် ရရှိစေဖို့ အာမခံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(၈) အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်စေရန် အာမခံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ ( ဥပမာ - အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှ လိုင်စင် ထုတ်ပေးတာ)
(၉) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွေရဲ့ ထိရောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီမှု၊ အရည်အသွေးတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းနဲ့ တိုင်းတာပြီး အကဲဖြတ်ခြင်း။
(၁၀) ပြည်သူလူထု ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ်တွေ၊ အမြင်သစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ အတွက် သုတေသန လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(စာကိုး - 10 Essential Public Health Services ( CDC) )
ဒီနေ့က မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံ အတော်များများရဲ့ "မိခင်များနေ့" လို့ wikipedia မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မေလ၊ ဒုတိယ သီတင်းပတ်ရဲ့ တနင်္ဂနွေရက်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာကတော့ အချိန်ကွာဟ မှုကြောင့် မနက်ဖြန်မှ ကျရောက်မှာပါ။
ဒီနှစ် မိခင်များနေ့ အတွက် CARE အဖွဲ့ က ၀င်လာတဲ့ သတင်းပေးချက်ကလေးကို ပြန်မျှပေးချင်ပါတယ်။
“တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပြောမယ် ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ အမျိုးသမီး ၁၄၀၀ ဦးဟာ ကိုယ်
၀န်ဆောင်ခြင်း၊ မီးဖွားခြင်းတို့နဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ ပြဿနာများကြောင့် နေ့စဉ် အသက် ဆုံးရှူံး နေကြရပါတယ်။
ဒီလို အသက်ဆုံးရှူံးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်း အများစုက ကာကွယ်တားဆီးလို့ ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အများစုက အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့၊ နားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေ နည်းပါးတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေမှာ နေထိုင်နေရတဲ့ အတွက် ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ” တဲ့။
Labels: Anniversary, gender, Public health
သွေးကြောပေါက်ပြီး လေဖြတ်ပုံနှင့် သွေးကြောပိတ်ဆို့ပြီး လေဖြတ်ပုံ
အရပ်သုံးစကား လေဖြတ်ခြင်း (stroke) ဟု ခေါ်သော ဆေးအခေါ်အဝေါ် Cerebro-Vascular Accident (CVA) သည် နှလုံးမှ ဦးနှောက်သို့ သွေးထောက်ပံ့ပေးနေသော သွေးကြော ထိခိုက်ပျက်စီး၍ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးယိုစီးခြင်း (Haemorrhage) (သို့မဟုတ်) တခြားမှ မျောပါလာသော အစအနတခုခုက ဦးနှောက်သွေးကြောကို လာရောက် ပိတ်ဆို့စေခြင်း (Thrombosis) တခုခုကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ သွေးယိုစီးခြင်း (Haemorrhage) ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း (Thrombosis) ကြောင့်ဖြစ်စေ ထိုသို့ ဖြစ်ပါက ဦးနှောက်တွင် နှလုံးမှ ပို့ပေးသော အောက်စီဂျင်ကို အလုံအလောက် မရနိုင်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက် တစ်ရှူးတချို့ ပျက်စီးသွားသည်။ ထိုအခါ ထိုသက်ဆိုင်ရာ ဦးနှောက်အစိတ်ပိုင်း ထိန်းချုပ်ထားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဦးနှောက်ကြား အဆက်အသွယ် ပြတ်သွား၍ ဦးနှောက်မှ အမိန့်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိတော့၍ ထိုအစိတ်အပိုင်းများ အလုပ်မလုပ်နိုင် ဖြစ်သွားခြင်းကို လေဖြတ်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။
လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အဓိကအရင်းခံ ပြဿနာများမှာ
(၃) သွေးထဲကော်လက်စရောလ် (တိရိစ္ဆာာန်မှ ထွက်သည့် အဆီတမျိုး) များခြင်း၊
(၄)သွေးတိုး (သို့) ဆီးချို တခုခု (သို့) နှစ်ခုစလုံး ရှိခြင်း၊
(၅)အရက် အလွန်အမင်း သောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ် သောက်သောအခါ ဆေးလိပ်အတွင်းတွင် ပါဝင်သော နီကိုတင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အားလုံးကို ထိခိုက်စေပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို အလွန်အမင်း များစေပြီး သွေးကြောထဲ အောက်စီဂျင်ကို နည်းစေခြင်း၊ သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းရှိ တခြား ပါဝင်သော ဓါတ်ပေါင်းများ (Arterial Blood gases) ကိုလည်း မမျှမတ ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် သွေးလွှတ်ကြောကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် များသောအခါ နှလုံးမှ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားသို့ အာဟာရနှင့် အောက်စီဂျင် ထောက်ပံ့ရာတွင် အရောက်နှေးကွေးစေပါသည်။ အရပ်နှင့်မမျှအောင် ကြီးမားနေသော ခန္ဓာကိုယ်မှ တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း အာဟာရနှင့် အောက်စီဂျင်ကို အလုံအလောက် ပို့ပေးနိုင်ရန် နှလုံးနှင့် သွေးလွှတ်ကြောသည် ခန္ဓာကိုယ် ကြီးမားလေ အလုပ်ကို မနိုင်မနင်း ပိုလုပ်ရလေ ဖြစ်သည်။
(၃) သွေးထဲ ကော်လက်စထရောလ် အဆီများခြင်း
သွေးထဲတွင် ကော်လက်စထရောလ် များပါက ကော်လက်စထရောလ်ကြောင့် သွေးကို လိုသည်ထက်ပို၍ ပျစ်ခဲစေပြီး သွေးစီးမှုကို နှေးစေခြင်း၊ ၎င်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အဆီဖတ်များသည် သွေးကြောနံရံတွင် အနည်ထိုင်ကာ တွယ်ကပ်စေပြီး သွေးလွှတ်ကြောကို မာကျောစေခြင်းနှင့် ကျဉ်းစေခြင်း၊ အချိန်ကြာလာသောအခါ သွေးကြောနံရံတွင် အနည်ထိုင်၍ မာကျောနေသော ကော်လက်စထရောလ် အဖတ်များသည် တစစီပဲ့ထွက်ကာ သွေးထဲ၌လွှင့်မျောပြီး သွေးကြောကို ပိတ်ဆို့စေပါသည်။ နှလုံးသွေးကြော၊ ဦးနှောက်သွေးကြောနှင့် မည်သည့်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းရှိ သွေးကြောကို ပိတ်ဆို့ခံရသည်ဖြစ်စေ ပိတ်ဆို့ခံရသော အစိတ်အပိုင်းအတွက် အောက်စီဂျင်ကို ပြတ်တောက်စေပါသည်။
(၄) သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါများ ရှိခြင်း
သွေးတိုးရောဂါသည် ထိုကဲ့သို့ သွေးလွှတ်ကြောမှ မနိုင်မနင်း အလုပ်လုပ်ရဖန် များသောကြောင့် ဖြစ်လာရသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူသည် သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်အတိုင်း မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက ကိုယ်အလေးအချိန် များခြင်းကြောင့် ရင်ဆိုင်ရသော အထက်ပါ အခက်အခဲများအပြင် သွေးလွှတ်ကြောမှာ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သည့်အား မရှိသောကြောင့် အရှိန်နှင့် တိုက်စားလာသော သွေးဖိအားဒဏ်ကို မခံနိုင်ပဲ သွေးကြောကို လွယ်ကူစွာ ပေါက်ပြဲစေပြီး သွေးယိုစီးစေခြင်း (Haemorrhage)ကို ဖြစ်ပြီး လေဖြတ်စေနိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသည် သွေးထဲရှိ သကြားဓါတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်နေအောင် အမြဲတမ်း မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက စားသုံးလိုက်သည့် ထမင်းနှင့် တခြားအာဟာရများမှ ကူးပြောင်းပေးလိုက်သော ဂလူးကို့စ် (သို့) သကြားဓါတ်များကို ဆဲလ်များမှ စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲ သွေးထဲတွင်သာ လှည့်လည်သွားလာ နေသောကြောင့် ၎င်းမှာလည်း ကော်လက်စထရောလ်နည်းတူ သွေးကြောနံရံတွင် အနည်ထိုင်စေကာ သွေးကြောကို မာကျော၊ ကျဉ်းမြောင်းစေပြီး အစပဲ့ထွက်လွှင့်မျောကာ ဦးနှောက်သွေးကြောကို သွားပိတ်ဆို့စေခြင်း((Thrombosis) ကို ဖြစ်ပြီး လေဖြတ်စေပါသည်။
(၅) အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း
အရက်အလွန်အကျွံ သောက်ခြင်းသည် ဗဟိုအာရုံကြော အဖွဲ့အစည်း (Central Nervous System (CNS) အား တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စေသောကြောင့် အာရုံတုံ့ပြန်မှု (Motor Function) အလုပ်လုပ်နိုင်အားကို ပျက်စီး (သို့) လျှော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင် သွေးကြောအပါအ၀င် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အားလုံးရှိ ကြွက်သားများကိုလည်း ပြေလျှော့စေသောကြောင့် သွေးလွှတ်ကြော၏ အလုပ်လုပ်နိုင်မှု အားကို ဆုတ်ယုတ်စေပြီး အောင်စီဂျင် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ကြွက်သား ပြေလျှော့စေခြင်းနှင့် အာရုံတုံ့ပြန်မှု အားနည်းသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အလုပ်လုပ်မှုနှင့် ဦးနှောက်ထိန်းချုပ်မှုကို လျှော့စေသော်လည်း အရက်သောက်ခြင်းသည် စိတ်ကို တက်ကြွစေပြီး အာရုံခံစားမှု (Sesory) ကိုမူ လွန်ကဲစေပါသည်။ ထိုတက်ကြွလွန်ကဲသော အာရုံကြောင့် မရှိကို အရှိအဖြစ် ထင်မှတ်ယူဆခြင်း (delusion)၊ အာရုံတွင် တကယ်မဟုတ်သည့် အကြား၊ အမြင်နှင့် ခံစားမှုများ ထင်ဟပ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း (Auditory, visual and tatile hallusination) တို့အား ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် အရက်မူးခြင်း နှစ်ခုစလုံးသည် ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေခြင်း ဟူသည့် အကြောင်းရင်း တူသောကြောင့် လေဖြတ်သော သူတယေက်တွင် တွေ့နိုင်သည့်လက္ခာတချို့ကို အရက်မူးနေသူတွင်လည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အသိ၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းသွားခြင်း၊ စကားပြောလျင် ဗလုံးဗထွေးဖြစ်နေခြင်း၊ လမ်းကို ဒယိမ်းဒယိုင်လျှောက်ခြင်း၊ မျက်လုံးကို ကောင်းကောင်း မဖွင့်နိုင်ခြင်း၊ အစာကောင်းကောင်း မမျိုနိုင်ခြင်း စသည်တို့သည် ဦးနှောက်ပုံမှန် အလုပ်မလုပ် နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော လဏ္ခာများ ဖြစ်သည်။
ထိခိုက်သည့် သွေးကြောအလိုက် ဦးနှောက်တစ်ရှူး ပျက်စီးသည့် အစိတ်အပိုင်း ကွဲပြားသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း (သို့) အလုပ်လုပ်မှုစနစ် ချွတ်ယွင်းသွားသည့် နေရာနှင့် လက္ခဏာများမှာလည်း ကွဲပြားသည်။ ထိခိုက်သွားသော ဦးနှောက်၏ ဧရိယာအပေါ်မူတည်၍ လှုပ်ရှားရာ၌ ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်တခြမ်း (သို့) တပိုင်းသေသွားနိုင်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းသွားနိုင်ခြင်း၊ စကားမပြောနိုင်ခြင်း (သို့) မပီတော့ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နားထဲမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ အမြဲဆူညံနေသလို ခံစားရခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လေဖြတ်ခြင်းကို X-ray, CT (Computer Tomography) scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), သွေးစစ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်အတွင်း အရည်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဦးနှောက်လျှပ်စစ်လှိုင်းကို (EEG) စစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် စမ်းသပ်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
လေဖြတ်သည်ဟု သိသည်နှင့် (သို့) သင်္ကာမကင်း ဖြစ်သည်နှင့် ချက်ချင်း အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်ရမည်။ သွေးကြော ပိတ်ဆို့မှု (သို့) သွေးယိုစီးမှုအတွက် ဦးနှောက်ကို ခွဲစိတ်ကုသရမည်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် နောက်ထပ်တကြိမ် သွေးကြောပိတ်ဆို့ပြီး လေဖြတ်ခြင်းကို ထပ်မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ Aspirin, Warfarin စသည့် လူနာနှင့် သင့်တော်သည့် သွေးကိုကျဲစေသည့် ဆေးတခုခု ပေးနိုင်သည်။ ထိခိုက်သွားသော ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအား အကောင်းဆုံး ပြန်လည် အလုပ်လုပ် နိုင်စေရန်အတွက် ထိခိုက် ပျက်စီးသွားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းနှင့် ထိခိုက်သည့် အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်ခြင်း (Rehabilitation) ဖြင့် အချိန်ယူ၍ ကုသရပါသည်။
ဦးနှောက် တစ်ရှူးပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု အနည်းအများအပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းအကျဉ်းမှ လုံးဝ ပြန်လည် သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်နိုင် ဖြစ်သွားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်း ကွဲပြားသည့်အတွက် တွေ့ရမည့် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များလည်း ကွဲပြားပါတယ်။ ဥပမာ- စကားပြောမရ၊ အစာမျိုမရ၊ (သို့မဟုတ်) စကားပြောမပီ၊ အစာမျိုရခက် ဖြစ်သွားပါက လ့ကျင့်ခန်းအတွက် Speech Pathologists နှင့် Dieticians ကို တွေ့ရမယ်။ ကိုယ်ကာယ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း မသန်စွမ်း၊ ဖြစ်သွားပါက Physiotherapists နဲ့ Occupational therapists တို့အား တွေ့ရမယ်။ သြစကြေးလျားတွင် လေဖြတ်သည့် အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များနဲ့ တွေ့ပြီးပါက အိမ်မှာ မိမိဖါသာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် နေ့စဉ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သည့် တကိုယ်ရေ တကာယကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အသေးစိတ်ကို သင်ပြပေးပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီစဉ်တွေ (Follow up programmes) တွေကို ပေးပြီးမှ ဆေးရုံက ပေးဆင်းပါသည်။ မြန်မာပြည်မှာ လေဖြတ်သူအတွက် လေဖြတ်သူအတွက် ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှု (Rehabilitation Services) ရှိမရှိ မသေချာသည့်အတွက် အကောင်းဆုံးက အိမ်ရောက်ပြီးနှင့် နောက်ပိုင်း ဆက်လုပ်ရမည့် အချက်များကို ဆေးရုံမဆင်းမီ ဆေးရုံမှာ မိမိအား အဓိက တာဝန်ယူ ကုသပေးသည့် ဆရာဝန် (Treating Doctor) နှင့် အသေအချာ တိုင်ပင်မေးမြန်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ထိန်းခြင်း (BMI 18.5-25)၊ အဆီများသည့် အစားအစာများနှင့် အသားကို လိုသည်ထက် ပိုမစားခြင်း၊ သွေးတိုးရှိသူများသည် သွေးပေါင်းချိန်ကို အမြဲတမ်းပုံမှန် ဖြစ်နေအောင် ထိန်းချုပ်ရန် ဆရာဝန်၏ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း မပျက်မကွက် လိုက်နာခြင်း၊ ဆီးချိုရှိသူများသည်လည်း သွေးထဲ သကြားဓာတ်ကို မမြဲတမ်းပုံမှန် ဖြစ်နေအောင် ထိန်းချူပ်နိုင်ဘို့အတွက် ဆရာဝန် ညွန်ကြားသည့်အတိုင်း မပျက်မကွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အရက်ကို သောက်သင့်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်ထက် ပိုမသောက်ခြင်း (လုံးဝမသောက်က ပိုကောင်းပါသည်)၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန် ပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ မကာကွယ်နိုင်ပါက ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အ၀လွန်သူ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို ရှိသူ၊ အရက်အလွန်အမင်းသောက်သူ၊ သူများသည် တနေ့လေဖြတ်ပြီး မသန်စွမ်းဘ၀ ရောက်မည့်ရာခိုင်နှုန်းအတော်များပါသည်။ လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပြီးသူများ ပိုမဆိုးအောင် ကာကွယ်နိုင်ပြီး မဖြစ်သေးသူများ ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
Photo Credit: medical-dictionary.thefreedictionary.com
Posted by Nge Naing5comments
Labels: Non-communicable disease, Stroke
ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါဟာ အဆုတ် တွင်းရှိ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ကို ထိခိုက် စေသော နာတာရှည် ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် .. အမေရိကတွင် လူဦးရေ ၁၇ သန်းကျော် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ ခံစားနေရပြီး သုံးပုံ တစ်ပုံမှာ ကလေးများ ဖြစ်ပါတယ်.. ၂၀၀၂ ခုနှစ် တွင် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံ တက်ရ သူပေါင်း ၄၇၈,၀၀၀ ဦး ရှိပြီး ၄,၆၅၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ ပါတယ်...
အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန် အကြောင်း ပထမဆုံး ပြောပြ ချင်ပါတယ်.. ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ လေထဲမှ အောက်ဆီဂျင် နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှ ကာဗွန် ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် တို့ ဖလှယ်ခြင်း သည် အဆုတ်၏ အဓိက လုပ်ငန်း တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်... အောက်ဆီဂျင် ကြွယ်ဝ သော ရှူသွင်း လိုက်တဲ့ လေဟာ လေမျို (Larynx)၊ လေပြွန်မကြီး (Trachea)၊ လေပြွန် (Bronchus)၊ လေပြွန်ငယ် (Bronchiole) တို့ကို အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီး လေအိတ် (Alveoli) များ သို့ ရောက်ရှိ တဲ့အခါ အဆုတ် သွေးလွှတ်ကြော ငယ် (Pulmonary arteriole) များထဲမှ ကာဗွန် ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် နဲ့ ဖလှယ် ကြ ပါတယ် (Gas Exchange) ... အဲဒီမှ တစ်ဆင့် အဆုတ် သွေးပြန်ကြော (Pulmonary veins) များမှ နှလုံး သို့ ပို့ဆောင်ပြီး နှလုံးမှ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး သို့ ဖြန့်ဝေ ပို့လွှတ်ပါတယ်... ဒါ့ကြောင့် အောက်ဆီဂျင် ကို ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြား မှ တစ်ရှူးများ၊ ဆဲလ် များ အသက် ရှင်သန် ရေးအတွက် အသုံး ပြုနိုင် ကြပါတယ်..
ပန်းနာ ရင်ကျပ် ရောဂါ ခံစား ရပြီ ဆိုလျှင် အဆုတ်ဟာ အဓိက တုန့်ပြန်မှု (၃) ရပ် ဖြစ်ပေါ် ပါတယ်...
အဆုတ် လေပြွန်ငယ် များ (Bronchioles) ကျဉ်းမြောင်း လာခြင်း (Bronchoconstriction)
လေပြွန်ငယ် များရှိ ကြွက်သား များ ကျုံ့ခြင်း ကြောင့် လေပြွန်ငယ် များ ကျဉ်း လာပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့် အသက် ရှူထုတ် တဲ့ အခါ ၀ီစီ ကဲ့သို့ အသံ မြည်ပြီး မောလာ တတ်ပါတယ်..
အဆုတ် လေ၀င် ရာ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ယောင်ရမ်းပြီး အချွဲများ (mucus) ထွက်လာခြင်း (Bronchial Inflammation)
ဓါတ်မတည့် ပစ္စည်း တစ်မျိုး ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း ၀င်ရောက် လာပါက လေပြွန်ငယ် နံရံ တစ်လျှောက် မှ ယောင်ရမ်း ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဓာတု ပစ္စည်း များ (Histamine, Leukotrienes) ထွက်လာပြီး လေပြွန် ငယ် များက်ို ယောင်ရမ်း စေပြီး ချွဲပြစ်သော အရည်များ (mucus) ထွက်လာပါတယ်.. လေပြွန်ငယ် ယောင်ရမ်း မှု၊ ချွဲထွက် လာမှု ကြောင့် လေပြွန်ငယ် ကျဉ်းခြင်း ပိုဆိုး လာစေ ပါတယ်...
အဆုတ် လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်မှ တုန့်ပြန်မှု လွန်ကဲခြင်း (Hyperreactivity)
ဓာတ်မတည့် မှုကြောင့် ကြာရှည်စွာ လေပြွန်ငယ် ယောင်ရမ်း ခြင်း ၊ လေပြွန်ငယ် ကျဉ်းမြောင်း ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် ဓာတ်မတည့် မှု ပစ္စည်း များ ကို ပို၍ တုန့်ပြန်မှု များ လာပါတယ်...(Hypersensitivity)
ပန်းနာ ရင်ကျပ် ရောဂါ လက္ခဏာ များမှာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကွဲပြား နိုင်ပါတယ်... အဓိက အဖြစ်များ ဆုံး လက္ခဏာ (၄)မျိုး မှာ
အသက် ရှူခက် လာခြင်း (Shortness of Breath)
အသက် ရှူထုတ် ရာတွင် ၀ီစီသံ ကဲ့သို့ အသံ မြည် လာခြင်း (Wheezing)
ရင်ကျပ်လာခြင်း (Tightness of chest)
တို့ ဖြစ်ပါတယ်.. ရင်ကျပ် မှု ပြင်းထန်ပါက လေအိတ်မှ ကာဗွန် ဒိုင်အောက် ဆိုဒ် နဲ့ အောက်ဆီ ဂျင် ဖလှယ် ခြင်း လုပ်ငန်း ထိခိုက် လာ၍ သွေးတွင်း အောက်ဆီ ဂျင် လျော့ကျပြီး ကာဗွန် ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် များလာ ပါတယ်... အောက်ဆီ ဂျင် နည်းလာ၍ ခြေသည်း လက်သည်း နှင့် နှုတ်ခမ်း များ ပြာလာခြင်း (cyanosis)၊ နံရိုး ကြား ကြွက်သား များ အသုံးပြု ၍ ပြင်းထန်စွာ အသက်ရှူ ရခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် တတ် ပါတယ်...
ပန်းနာ ရင်ကျပ် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း ဟာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ (Environmental factors) ကြောင့်လား? မျိုးရိုး ဗီဇ (Genetic factors) ကြောင့်လား? ဆိုတာကို တိတိကျကျ မသိရ သေးသော်လည်း အဓိက အားဖြင့် နှစ်မျိုး နှစ်စား တွေ့ရှိ ရပါတယ်.. ပြင်ပ မှ ဓါတ်မတည့် မှု (allergies or extrinsic) ကြောင့် ဖြစ်သော ပန်းနာ နှင့် ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း အခြေ အနေ (nonallergies or intrinsic) ကြောင့် ဖြစ်သော ပန်းနာ ဆိုပြီး တွေ့ရ ပါတယ်.. ဓါတ်မတည့် မှု (allergies or extrinsic) ကြောင့် ဖြစ်သော ပန်းနာဟာ အတွေ့ များပြီး လူနာ အားလုံး၏ ၉၀ % ရှိပြီး ကျန် ၁၀ % ကသာ ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း အခြေ အနေ (nonallergies or intrinsic) ကြောင့် ဖြစ်သော ပန်းနာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဓါတ်မတည့် ဖြစ်စေသော ပစ္စည်း များမှာ
နေအိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ရှိ နေ့စဉ် ထိတွေ့ နေကျ အရာများ
တိရစ္ဆာန် အညစ်အကြေးများ နှင့် အမွှေးအမျှင်များ၊ ဖုန်နှင့် အမှိုက်သရိုက်များ (Dust)၊ ပိုးဟပ် အညစ်အကြေးများ (cockroach )၊ အဆောက်အဦး၊ နံရံဟောင်း များ ရှိရေညှိ ပင်များ (mold)၊ ပန်းဝတ်မှုန်များ (Pollen)
နေအိမ် သုံး ပစ္စည်းများ ၏ အနံ့အသက် များ
ရေမွှေး နှင့် အမွှေး နံ့သာများ၊ ဆပ်ပြာ ဆပ်ပြာရည် ခေါင်းလျှော်ရည် များ၊ hair spray, hair gel, sun screen, cosmetics, facial cream, deodorant, shaving cream ကဲ့သို့ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း များ၊
နွားနို့ (Cow's Milk)၊ မြေပဲ (Peanut)၊ ပဲပုတ် (Soy)၊ ငါး (Fish)၊ တိရိစ္ဆာန် ဥများ (Eggs)၊ ပုဇွန် နှင့် အခွံမာ ပင်လယ်စာများ (Shrimp & other shellfish)၊ ကြာရှည် အထားခံ သော အစားအစာ များ (Preservative Foods)
သုံးစွဲ နေသော ဆေးများ
အက်စ်ပရင် (aspirin)၊ beta-blockers (propranolol, atenolol)၊ ပင်နစလင်များ၊
စက်ရုံ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် မှ အငွေ့များ
ဆာလဖိုက် ဓာတ်ငွေ့များ၊ ကလိုရာမင်း ဓာတ်ငွေ့များ၊ စက်ပစ္စည်း များမှ အိပ်ဇော ငွေ့များ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့၊ ခြင်ဆေးခွေ ငွေ့များ၊ အစ ရှိသဖြင့်...
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ
အဓိက အားဖြင့် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း အထက်ပိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ၀င်ရောက်မှု (Upper respiratory tract infection) ကြောင့် ပန်းနာ ရင်ကျပ် ဖြစ်ခြင်းသည် လူကြီး အားလုံး၏ ၈၀% နှင့် ကလေးအားလုံး ၏ ၆၀% တွေ့ရှိ ရပါတယ်...
ဓာတ်မတည့် ခြင်းဖြစ်စဉ် တွင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဓာတ်မတည့် ပစ္စည်း ချင်း၊ ဓာတ်မတည့် နိုင်ချင်း တူညီ နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ..
ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ ကုထုံးများ
အဓိက အားဖြင့် အာနိသင် (၂) မျိုး လိုအပ် ၍ သာ စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ ရှူဆေး အနေဖြင့် ထုတ်လုပ် ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်... ပထမ အာနိသင် မှာ လေပြွန် ကို ကျယ်စေခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အာနိသင် မှာ လေပြွန် ယောင်ရမ်း မှုကို ကျစေ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.. လေပြွန် ကို ကျယ်စေ တဲ့ ဆေးများ မှာ beta2agonist (salbutamol, terbutaline, ...), anticholinergic drugs (ipratropium bromide), methyxanthine (Theophylline, Aminophylline, ..); လေပြွန် ယောင်ရမ်း မှုကို ကျစေသော ဆေးများ မှာ corticosteroids (Prednisolone, Beclomethasone, Triamcinolone, Budesonide, ...), Leukotriene modifiers (montelukast, zafirlukast, pranlukast, and zileuton), Cromoglycate (Cromolyn sodium) တို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်.. ရှူဆေးများ (Inhalers) မှာ လေပြွန် ကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိ၍ ရောဂါ လက္ခဏာ ကို မြန်ဆန်စွာ သက်သာ စေပြီး ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး မှာလည်း သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး ထက် စာလျှင် နည်းပါး ပါတယ်... ထို့ကြောင့် ရောဂါ ပြင်းထန် မှုပေါ် မူတည်၍ ရှူဆေး၊ သောက်ဆေး များကို ရွေးချယ် ပေးခြင်း ဖြင့်၎င်း၊ ဆေး တစ်မျိုး နှင့် မလုံ လောက်ပါက နှစ်မျိုး သုံးမျိုး တွဲပေး ခြင်း ဖြင့်၎င်း ကုသ နိုင်ပါ တယ်... လိုအပ် ပါက အောက်ဆီ ဂျင် ပေး၍၎င်း၊ ဆေးများကို စက်ဖြင့် မှုတ်သွင်းနည်း (Nebulizer) ဖြင့်၎င်း လူနာ အခြေ အနေ ပေါ် မူတည်၍ ကုသ ပေးရ ပါမယ်...
ရောဂါ ကာကွယ် ရေး အနေဖြင့် မိမိနှင့် မတည့်သော ဓာတ်ပစ္စည်း များ၊ အစား အသောက် များ၊ အသုံး အဆောင်များ ဂရုစိုက် ရှောင်ရှား ဖို့လို ပါမယ်.. လူဦးရေ ထူထပ် သော နေရာ လေထု ညစ်ညမ်း သော နေရာ များ ကို ရှောင်ရှား ရပါမယ်.. ဆေးလိပ် သောက်သူ ဖြစ်ပါက ဆေလိပ် လုံးဝ ဖြတ်ရ ပါမယ်... ဒါ့ကြောင့် မိမိ ရင်ကျပ် တတ်သော အခြေ အနေ၊ နေရာ ဒေသ၊ အသုံး အဆောင်၊ အပြု အမူ များကို ဂရု စိုက် ရှောင်ရှား ရင်း ကျန်းမာ စွာ နေထိုင် နိုင်ရေး ကို အလေး ထား သင့် ကြောင်း ရေးသား လိုက်ရပါတယ်.. ဘေးဘယာ ရောဂါ အပေါင်းမှ ကင်းဝေး နိုင်ပါစေ..
Posted by Dr. Win Thein4comments
Labels: Environmental health, Non-communicable disease, Respiratory system
ဒေသခံ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများအတွက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ
ဒီ network Learning ဆိုတဲ့ website ကလေးထဲမှာ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းကလေး တစ်ခုကို ဘယ်လို ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ကြမလဲ ဆိုတာက စလို့ အလှူရှင်တွေဆီ စာရေးတာ အပါအ၀င် NGO တစ်ခု အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာ အထောက်အကူ တော်တော်များများ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို ဘယ်လို ကျင်းပရသလဲ၊
အခြေခံ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာ၊
၀န်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရမလဲ၊
ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာ၊
ကိုယ့်အဖွဲ့လေးရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြေ၊ အခက်အခဲ စတာတွေကို ဘယ်လို ပြန်လည်သုံးသပ်မလဲ၊
အစီရင်ခံစာ ရေးတာ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ e-book တွေကို download လုပ်ပြီး ဖတ်လို့ ရပါတယ်။
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် အဲဒီမှာ တင်ထားပေးတဲ့ စာအုပ်တွေ အားလုံးကို ကျွန်မ မဖတ်ဖြစ်သေးပါဘူး။
အဓိက ဖတ်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုခဲ့ဖူးတာက " How to buildagood small NGO " ဆိုတဲ့ လက်စွဲ စာအုပ်ကလေးပါ။
ကျွန်မ အကူအညီ ပေးခဲ့ရတဲ့ community based organization လေးတွေအတွက် တော်တော်လေး အသုံးတည့်ခဲ့ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့သူတွေ အသုံးတည့်နိုင်မယ် ထင်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်တာပါ။
Labels: e-book, Manual, NGO, Self learning